Mootummaan Baraaraa Akka Hundeeffamuu Fi Mariin Siyaasaa Qooda Fudhattoota Mara Hirmaachise Akka Gaggeeffamuuf Waamicha Goona | QEERROO
Posted on June 25, 2021 by Qeerroo
1. Mootummaa Baraaraa Yeroo Federaala Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa hundeessuudhaan, Qooda fudhattoonni marti walitti dhufanii marii siyaasaa hunda hammataa akka gaggeessaniif haala mijeessuu;
2. Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa fi Pirezidaantiin Mootummaa Federaala Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa, Mootummaan Baraaraa Mootummaa Federala Dimokratawaa Itophiyaa (MFDI) yeroo hundeeffamee marii siyaasaa hunda hammataa akka gaggeeffamuuf nageeya akka mirkaneessan hubachiifna;
3. Waraanaa fi walitti bu’insa naannoolee biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru hatattamaan, dhaabuun loltoota Ertiriyaa fi humni nageenyaa fi qaruxee isaa biyya Itoophiyaa keessaa baafaman. Looltota Ertiriyaa Itoophiyaa keessaa baasuun Itoophiyaafis ta’e Ertiriyaadhaaf jennee amanna;
4. Uummattoonni Itoophiyaa fi dhaabbileen siyaasaa marti haala eerame kanaan ga’ee fi itti gaafatamummaa isaanii akka ba’an dhaamna;
5. Hawaasi idil-addunyaa fi uummattoonni Itoophiyaa Mootummaa Baraaraa mariin Siyaasaa akka gaggeeffamuuf haala mijeessu akka hundeeffamuuf dhiibbaa akka godhan yaadachiifna;
6. Dhuma irrattis, Mootummaan Ce’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa biyyattii keessatti nagaa fi tasgabbii buusuudhaaf, haala danda’ame maraan mariin siyaasaa bu’a qabeessa ta’e akka gaggeeffamuuf sabaa fi sablamoota biyyattii mara waliin akka hojjatu mirkaneessina.